Distrochooser: Ilay tranonkala manampy anao hisafidy ny tsara GNU / Linux Distro | Avy amin'ny Linux
Linux PostInstall | | About us, soso-kevitra
Ho an'ny mpampiasa maro (vaovao na vao manomboka) dia nitranga izany rehefa nanomboka teto amin'izao tontolo izao izy ireo GNU / Linux misafidy ny hitafy a Recommended na lamaody distro, izay tonga amin'izy ireo ny fampahalalana avy amin'ny olona na mpikambana sasany amin'ny sasany Fiarahamonina na vondrona izay nidiran'izy ireo na anisany.
Noho izany dia matetika no GNU / Linux Distro izay ampiasainay dia tsy vokatry ny tena izy famakafakana metodolojika ny zavatra tadiavintsika, ilaintsika ary misy. Ary eo no manomboka ny hetsika, ny tranokalan'i Distrochooser.
Distrochooser Izy io dia tranokala tena tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa vaovao na tsy dia manana traikefa, satria manampy azy ireo hisafidy ilay izy Fitsinjarana GNU / Linux mety kokoa na mety kokoa, arakaraka ny zavatra ilainao voalaza ao amin'ny taratasy fangatahana efa voaorina tsara.
Ianaro ny momba ny lozisialy maimaim-poana sy ny GNU / Linux nefa tsy mila apetraka akory
1 Distrochooser: Inona no GNU / Linux Distro tsara indrindra ho ahy?
1.1 Momba ny Distrochooser
1.2 Ahoana ny fomba fiasan'ny Distrochooser?
1.2.1 Fanadihadiana fitsapana
Distrochooser: Inona no GNU / Linux Distro tsara indrindra ho ahy?
Momba ny Distrochooser
Mety ho moramora ny mifidy sy mampiasa a GNU / Linux Distro, fa ny marina dia ho an'ireo izay manomboka eto amin'ity izao tontolo izao ity, na dia ho an'ireo izay efa manam-potoana ao aminy aza, dia matetika no, noho ny safidy maro azo atao, dia maro no afaka misafidy ny hampiasa Distro iray fantatra amin'ny anarana hoe DEBIAN, Ubuntu, Mint, MXLinux, na ireo samihafa toa ny Opensuse, Arch na Manjaro.
Ny fandavana ny fikarohana, ny famakafakana ary ny andrana dia mety hahasoa ny maro, fa amin'ny fampiasana ny Distrochooser, afaka mahazo fanampiana fanampiny ianao, izay mendrika ny tsy nahavita ireo voalaza etsy ambony. Ary noho izany antony izany, Distrochooser makà fanontaniana na endrika amin'ny Internet, amin'ny fanontaniana 16 hamaritana ny tsara indrindra GNU / Distros Linux ho an'ny mpitsidika araky ny valinteniny manokana.
Currently, the Tranonkala ofisialy Distrochooser manana fanohanana amin'ny fiteny maro, izany hoe amin'ny fiteny Alemanina, anglisy, sinoa, frantsay ary espaniola. Ho fanampin'izay dia misy a tranokala beta an-dàlam-pamolavolana, izay amin'ny fiteny ihany Alemanina, Anglisy ary Italiana.
Ahoana ny fomba fiasan'ny Distrochooser?
Distrochooser manao (mampiseho) a andiana entana (fanontaniana / toe-javatra) ho hitantsika manaraka, ary tsy maintsy valiana na voavaha, izay mazàna mandrakotra lafin-javatra na singa, toy ny haavon'ny fahalalan'ny mpandray anjara momba ny Computing, Informatika, GNU / Linux, ny haavon'ny fifehezana Solosaina, rafitra miasa ary fampiharana, ankoatry ny maro hafa.
Manaraka izany dia hanatanteraka ny fanadihadiana izahay mba hahitana izay atolotray anao araka ny valin-teninay tafiditra, mba hamporisihana ny hafa hanao izany koa.
Efijery an-trano: Amin'ny Espaniôla.
Item 1: Ny fizarana sasany dia noforonina ho an'ny tanjona manokana, ny sasany ho an'ny fampiasana isan'andro. Inona no ilainao?
Item 2: Ahoana ny fanombatanao ny fahaizan'ny fahaizan'ny fahaizako manoratra?
Item 3: Ahoana ny fanombatanao ny fahalalako ny Linux?
Item 4: Firy ny safidy tianao hovaina mandritra ny fametrahana azy? Firafitra firafitra firy no tsy maintsy fenoina sanda default?
Item 5: Ny ankamaroan'ny fizarana dia azo alefa avy amin'ny USB na DVD drive hanandramana ny fizarana nefa tsy manova ny solo-sainao na mametraka azy amin'ny kapila mafy. Ny hafa dia azo apetraka amin'ny tsato-kazo USB (fametrahana maharitra).
Item 6: Zava-dehibe ny fahafantarana hoe firy taona ny rafitra satria ny fizarana sasany dia tsy mandeha amin'ny solosaina taloha. Ny antony lehibe mahatonga an'io dia ny fihenan'ny fanohanana ireo haitao taloha toa ny rafitry ny processeur 32-bit ho an'ny maritrano 64-bit.
Item 7: Ny fizarana sasany dia aleony mamorona lahatsoratra amin'ny wiki ho an'ny mpampiasa hamaha ny olany. Inona no tianao?
Item 8: Linux dia afaka mampiasa interface maro samihafa an'ny mpampiasa ("Desktops"). Fizarana maro no mampiasa birao amin'ny alàlan'ny default. Zava-dehibe ny hahafantarana raha tianao ny interface manokana. Mbola afaka manova sy mametraka birao vaovao ianao amin'ny fotoana rehetra.
Item 9: Maimaimpoana ny ankamaroan'ny fizarana. Ny fizarana sasany dia manome fanohanana fanampiny ho an'ny sarany voalohany.
Item 10: Ny fizarana samihafa dia mametraka programa samihafa, ny sasany mametraka ampy hanombohana miasa eo noho eo. Ny sasany kosa tsy mametraka afa-tsy fametrahana fototra fotsiny, ka anjaran'ny mpampiasa ny misafidy izay hapetraka.
Item 11: Ny fahazoan-dàlana (ideolojia) fizarana dia adihevitra mitohy. Ny sasany manome rindrambaiko maimaimpoana fotsiny, ny sasany kosa manaiky rindrambaiko tsy maimaim-poana. Fahazoan-dàlana maimaim-poana mamela ny mpampiasa hanova, hizara indray ary hampiasa ilay rindrambaiko araka izay hitany fa mety. Misy toe-javatra tsy maintsy hampiasa lozisialy tsy maimaimpoana, ohatra, ho an'ny mpamily. Rindrambaiko tsy andoavam-bola dia tsy mamela fanovana na fanaraha-maso kaody. Zava-dehibe ny hahafantarana raha manana safidy momba ireo maodelin'ny fahazoan-dàlana samihafa ianao.
Item 12: Ny fizarana sasany dia mampiasa serivisy an-tserasera hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa. Mety hisy fiantraikany amin'ny fiainana manokana an'ny mpampiasa izany, azo zahana ny mpampiasa rehefa mampiasa endri-javatra toy izany izy.
Item 13: Ny fizarana sasany dia manome ny lohahevitr'izy ireo sy ny sary masina hamoronana fiainany feno ho an'ny mpampiasa.
Item 14: Ny fizarana sasany dia mety mampiasa fiasa manokana, toy ny fanatsarana ny fiarovana. Iza amin'ireo fiasa manaraka no tiako hampiasaina (raha misy)?
Item 15: Amin'ny Linux dia azonao atao ny mametraka rindrambaiko amin'ny fomba samihafa. Azonao atao ny manangona rindrambaiko avy amin'ny kaody loharano na mametraka azy amin'ny alàlan'ny fonosana. Inona no tianao?
Item 16: Ny fizarana sasany dia manome fanavaozana matetika kokoa, izay mety hisy fiatraikany amin'ny fitoniana eo amin'ny rafitra. Inona no tianao?
Valin'ny fitsapana: Ireo Distros natolotry Distrochooser miorina amin'ny valiny tafiditra dia:
Raha fintinina, ireo natolotra ahy dia safidy tsara hafa. Na izany aza, aleoko foana ny mampiasa ny kinova fanaoko sy nohavaozina MX Linuxantsoina hoe FAHAGAGANA.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny tranonkala «Distrochooser», izay tranonkala tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa vaovao na tsy dia manana traikefa, satria manampy azy ireo hisafidy ilay Fitsinjarana GNU / Linux mety kokoa na mety kokoa arak'izay ilainao; be be fahalianana sy fampiasana, Ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Distrochooser: Ilay tranonkala manampy anao hisafidy ny GNU / Linux Distro mety
LXQt 0.15.0 dia efa nanolotra fanatsarana isan-karazany sy fanovana lehibe